HORDHAC : Slavia Prague VS Chelsea ? Xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey – Gool FM
(Europe ) 11 Abriil 2019 Kooxda Chelsea oo ku xisaabtameysa in sanadkan ay ku guuleystaan tartanka Europe League ayaa caawa la ciyaareysa kulanka lugta Koowaad ee wareega sideed dhamaadka Kooxda Slavia Prague.
Bules ciyaartoydooda waxa ay dareemayaan daal madaama ay ciyareen habeenimadii isniinti misane kulan adag ay la ciyaari doonaan Kooxda Liverpool Axada soo aadan sidaas darteed hogaamiyaha Bules ma isticmaali doono ciyaartoydiisa ugu muhiimsan.
Kooxda Slavia Prague ayaa heleysa adeega xidigooda Vladimir Coufal kaas oo ka ganaaxnaa Kooxdiisa balse nasiib daro waxey markan waayi doonaan adeega Tomas Soucek kaas oo isna kulanka caawa ku seegaya qaab ganaax waxaana booskiisa badali kara Josef Husbauer.
Kooxda Chelsea ayaa soo ciyaartay habeenimadii isniinta aheyd waxaana xusid mudan in Axada ay la ciyaarayaan Kooxda Liverpool , hadaba Maurizio Sarri ayaa ka fagaraya xaalka kulankan iyo sida uu ka yeeli lahaa ciyaartoydiisa ugu muhiimsan kulanka caawa .
Willian, Pedro, Olivier Giroud, Ross Barkley, Andreas Christensen, Mateo Kovacic, Davide Zappacosta iyo Marcos Alonso ayaan dhamaan tood ku soo bilaaban kulankii isniinti waxa ayna rajeenayaa in dhamaantood ay kulankan ku lug yeeshaan .
Kulanka : Slavia Prague VS Chelsea ? (Europe League )
Goobta: Sinobo Stadium
Goorta: 10:00 Habeenimo
Garsoorka :Felix Zwayer (Germany)
Waa markii ugu horeeyey oo ay tartan caalami ah oo ka tirsan Europe isku arkaan labadan koox ee Slavia Prague iyo Chelsea.
Kooxda reer Czech ayaa badisay hal kulan oo ka mid ah 9-kulan oo ay wajahday Kooxaha reer England tartamada Yurub ( 2-bareejo iyo 6-qasaaro) kulanka kaliya ee ay badiyeen waxa ay ka adkaadeen Kooxda Leeds United bishii March 2000 kulan ka tirsanaa UEFA Cup oo ku dhamaaday(2-1).
Waa markii 10-aad ee ay Chelsea’ soo gaarto wareega quarter-finalka dhamaan tartamada Europe tan iyo 2003-04. Waxa ay soo gudabyeen 9-ka mid ah 10-kaas marka laga reebo qasaaro mug leh oo ka soo gaaray Manchester United oo ka reebatay tartanka sanadkii 2010 -11 kulan ka tirsanaa Champions League wareegi sideed dhamaadka.
Chelsea ayaa badisay kulamo badan oo gaaraya ( 9-kulan ) waxa ayna dhaliyeen goolasha ugu badan ee tartanka laga dhaliyo xili ciyaareedkan waana 21-gool .
Chelsea weerarkooda Olivier Giroud ayaa ah hogaamiyaha gool dhalinta ee xili ciyareedkan tartanka Europa League waxa uuna lee yahay 9-gool,xidigii ugu dambeyey ee hal xili ciyareed dhaliyaa wax ka badan 9-gool waxa uu ahaa Aritz Aduriz kaas oo 10-gool u dhaliyey Kooxdiisa Athletic Bilbao sanadkii 2015-16.
Eeg safafka macquulka ah ee kulanka :
HORDHAC : Arsenal VS Napoli ? Xidigaha maqan, rikoorada kulanka iyo safafka macquulka ah ee ciyaarta